Banyere Anyị - Zhongshan Vangood Appliances Mfg Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhongshan Vangood Appliances Mfg Co.,Ltd.bụ ụlọ ọrụ ọkachamara na ngwa eletriki na gas.Isi ihe anyị na-emepụta na-agụnye ọkụ mmiri gas, ọkụ ọkụ eletrik, ihe ọkụkụ gas, ụlọ ọkụ gas, ihe mkpuchi ọkụ, ọkụ eletrik na ihe ndị ọzọ.
Dị ka alaka ụlọ ọrụ nke Foshan Vangood (WANGE na Chinese) Home Appliance Co., Ltd, nke tọrọ ntọala na 2001, Zhongshan Vangood Ngwa Mfg Co., Ltd e hiwere na-enweta kasị mma gas ngwa akụrụngwa na Zhongshan obodo, ya mere na-enye mma. ịdị mma na n'oge nnyefe nke ngwaahịa nwere ọrụ ka mma nye ndị ahịa anyị zuru ụwa ọnụ.
Anyị nwere otu ọkachamara ọkachamara na ngalaba R&D, ngalaba nrụpụta, ngalaba ahịa, na ngalaba ọrụ.Na kwa afọ mmepụta nke 300 puku tent nke gas mmiri okpomọkụ mmepụta ikike, ụlọ ọrụ nwere ike oru akụrụngwa uru, aku na gas mmiri okpomọkụ ihe ọmụma nke engineering na oru pesonel ihe karịrị iri na abuo, gụnyere 3 agadi engineer, yana a. ọnụ ọgụgụ ndị ọkachamara n'ọhịa.Ma onye isi injinia anyị maka ndị na-ekpo ọkụ gas na onye isi injinia maka hobs gas sitere na China na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ a, Vanward na Chinabest.
Zhongshan Vangood Appliances Mfg Co., Ltd, nwere usoro siri ike sitere na akụrụngwa, nyocha na njikwa ule nke usoro mmepụta ọ bụla, nyocha ikpeazụ na nnabata nke ngwaahịa emechara.A ga-enyocha ma nwalee ngwaahịa niile site n'aka ndị ọrụ nyocha ogo ọkachamara na ndị injinia dị mma.
Ewezuga nrụpụta, Vangood bụ ọkachamara na mbupụ ngwa gas.Isi ahịa ya na mba ofesi bụ Australia, Europe, Russia, South na North America, Africa wdg.
Anyị na-ekwe nkwa ịnye ndị ahịa anyị ngwaahịa dị elu yana ọrụ na-eju afọ.Anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ na gị.
● Obi ike●Ike●Ihe okike●Nzikọrịta ozi●Mmekọrịta
"Ndị mmadụ gbadoro ụkwụ", otu Vangood na-eme ka ikike na ọrụ dịịrị mmadụ pụta ìhè, na-eme ka uru nke ndị otu ya pụta ìhè.Vangood na-emejuputa usoro njikwa mmadụ, gbasara ndị ọrụ niile dị ka akụ nke ụlọ ọrụ ma soro ha na-etolite.
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọgbara ọhụrụ
N'ime ebe a na-esi nri Vangood na ebe a na-ekpo ọkụ gas, ị ga-ahụ ka ọrụ ebube si abịa.N'ebe a, a na-emepụta ọtụtụ nde arịa gas, nke bụ ihe akaebe nke ike nkà na ụzụ Vangood siri ike.A na-ebute ngwá ọrụ ndị bụ isi site na ụlọ ọrụ ndị a ma ama n'ụlọ na ná mba ọzọ.Usoro ọrụ ọ bụla bụ ngwakọta nke nka na teknụzụ.N'ebe a, ị ga-eti mkpu na teknụzụ dị elu ma nwee ekele maka ịdị mma nke ụwa.
A na-eji ogbako a kwadebere ahịrị mgbakọ 4 na ihe karịrị 100 mpempe akwụkwọ mmepụta ihe na nyocha, na-enye nnukwu mmepụta mmepụta na nnyefe ngwa ngwa.
Vangood nwere ndị otu R&D ọkachamara iji dobe ihe ọhụrụ ahụ, imegharị atụmatụ na ijikọ ihe ndị ahịa chọrọ.Ndị otu na-ere ahịa dị mma nke Vangood nwere ike ịnye ndị ahịa ọrụ 7x24H.
Vangood nwere usoro njikwa mma zuru oke, gụnyere IQC, IPQC, FQC na OQC;Otu onye otu QC nke 10 na-eme nnwale dị ukwuu n'oge ọ bụla n'oge mmepụta nke na-ekwe nkwa ngwaahịa ọnụ ahịa mbụ nye ndị ahịa ya.
Echiche bụ isi njikwa ubi
✦"Three Express": Nhazi steeti iji kwupụta na bọọdụ akara, steeti nyocha iji kwupụta na bọọdụ akara, Ọjụjụ steeti ikwupụta na bọọdụ akara.
✦"Atọ-Anala": Anabatala ndị na-adịghị mma, Emela ka ndị na-adịghị mma, Ebupụla ndị na-adịghị mma.
✦"Atọ na saịtị": Nkwenye ịdịmma nke saịtị, nyocha nke saịtị, nkwenye na saịtị.
Ezi obi, imekọ ihe ọnụ, na-aga n'ihu na-ele anya, kwalite ma ụlọ ọrụ na mmepe nke onye ọ bụla.
Ụdị nke ọrụ
Meghachi omume ngwa ngwa, Mee ya ugbu a, ewepụla mgbalị ọ bụla, na-achụso ịdị mma.
1. ISO9001: 2008 dị ka isi njikwa nduzi.
2. Ihe niile na-achịkwa, Onye ọ bụla bụ onye njikwa, Results-oriented.
Iwu ịdị mma
1. Ntinye zuru oke, nye ndị ahịa ngwaahịa na ọrụ na-eju afọ.
2. Site na mmejuputa usoro dị mma, ọganihu na-aga n'ihu maka nhazi na omume mmadụ, izute ihe ndị ahịa chọrọ.
3. Site na ọzụzụ, mee ka ndị ọrụ ọ bụla ghọta na àgwà bụ ndụ nke ụlọ ọrụ ahụ.